My Device Info - Android အတွက် Hardware နှင့် Software APK ဒေါင်းလုပ်
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » အကြှနျုပျ၏ Device ကိုအင်ဖို - ဟာ့ဒ်ဝဲ & Software များ
အကြှနျုပျ၏ Device ကိုအင်ဖို - ဟာ့ဒ်ဝဲ & Software များ APK ကို
အကြှနျုပျ၏ Device ကိုအင်ဖို၏အချက်အလက်တွေအားလုံးကိုရဖို့ရန်အသေးစားနှင့်လွယ်ကူသော-to-အသုံးပြုမှု utility ကို application ဖြစ်ပါတယ်
သင့်ရဲ့ Android device ကို။
မည်သည့် Android device ကို၏ device ကိုအင်ဖိုစစ်ဆေးရန်, ယခုသင်ရှာတွေ့ခြင်းနှင့် settings စာမျက်နှာသို့သွားရုံဒီ app ကိုအသုံးပြုဖို့နှင့်သင်သည်သင်၏လက်ညှိုးကိုအစွန်အဖျားမှာအားလုံးထုတ်ကုန်ရဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲအင်ဖိုရှိသည်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။
+ ဘက်ထရီအချက်အလက်များ: အခြေအနေ, အပူချိန်အချက်အလက်, စွမ်းရည်သို့မဟုတ်အရွယ်အစားအချက်အလက်, ဗို့အားနှင့်ကျန်းမာရေးအားသွင်းဘက်ထရီအဆင့်။
+ အင်ဖို Build: device id သည်, ကိရိယာတည်ဆောက်အိုင်ဒီ, ကိရိယာတည်ဆောက်အချိန်, ဘုတ်အဖွဲ့, boot loader, ဟာ့ဒ်ဝဲအချက်အလက်, အသုံးပြုသူအသေးစိတ်။
+ CPU ကိုအသေးစိတ်အချက်အလက်များ: က CPU ကိုရှိပါတယ်မည်မျှ cores ပြသထားတယ်ထုတ်ကုန်အများစုများအတွက် Processor ကိုအမျိုးအစား, ဗိသုကာ, CPU ကိုတည်းဖြတ်မူ, CPU ကိုအမှတ်စဉ်, ဟာ့ဒ်ဝဲအချက်အလက်, ။
+ screen Display ကိုအချက်အလက်များ: display အရွယ်အစားသို့မဟုတ် Resolution, သိပ်သည်းဆယူနစ်, သိပ်သည်းဆအမျိုးအစား, ကိရိယာ display ကိုအမျိုးအစားနှင့်တိမ်းညွတ်။
+ RAM ကိုအချက်အလက်များ: RAM ကိုရရှိနိုင်မှတ်ဉာဏ်, နေရာလွတ်ကိုအသုံးပြုစုစုပေါင်း RAM ကိုအရွယ်အစား, ။
+ device မော်ဒယ်အချက်အလက်များ: မော်ဒယ်အမည်, ထုတ်လုပ်သူ, အချိန်တည်ဆောက်, အမှတ်တံဆိပ်, etc
+ SIM ကဒ်အချက်အလက်များ: ရဲ့ IMEI number, IMSI အရေအတွက်အော်ပရေတာအသေးစိတ်။
+ Operating System ကို (OS) Software များအချက်အလက်များ: ဗားရှင်းအမည်, SDK ကိုနံပါတ်, လွှတ်ပေးရန်အရေအတွက်ကို။
+ သိုလှောင်ရေးအချက်အလက်များ: စုစုပေါင်းအရွယ်အစားနှင့်အတူ internal memory အသေးစိတ်, အသုံးအရွယ်အစား, အခမဲ့သို့မဟုတ်မရရှိနိုင်အရွယ်အစား။
+ root Checker: Device ကိုအမြစ်တွယ်သို့မဟုတ်မ, စူပါအသုံးပြုသူစစ်ဆေးမှုများ, အလုပ်များ Box ကိုစစ်ဆေးရန်, စူပါအသုံးပြုသူလမ်းကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။
+ Wi-Fi အချက်အလက်များ: ချိတ်ဆက်သို့မဟုတ်မ, Wi-Fi ချိတ်ဆက်အမည်, Wi-Fi, Mac Address ကို
အကြှနျုပျ၏ device ကိုအင်ဖိုဘက်ထရီအခြေအနေ, ဘက်ထရီရာခိုင်နှုန်းနှင့်လည်းယင်း၏ချိတ်ဆက်အားသွင်းဒါမှမဟုတ် USB ရိုးမရှိ charging အရင်းအမြစ်နှင့်အတူဘက်ထရီ related သတင်းအချက်အလက်ပြသထားတယ်။
သင်တို့သည်လည်းအပေါငျးတို့သ SoC အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုစာရင်းရှိရာဒီ app အတူ CPU ကိုဟာ့ဒ်ဝဲအသေးစိတျစစျဆေးနိုငျ။ သငျသညျဤစက်ကိရိယာအချက်အလက် app ကို အသုံးပြု. သိပ်သည်းဆနှင့် resolution နဲ့ Display ရဲ့အရွယ်အစားကိုသိနိုငျသညျ။
ဒီ app ကိုသင် device ကို model ကို, ကိရိယာအမှတ်တံဆိပ်, ကိရိယာထုတ်လုပ်သူများနှင့်လည်း device ကိုတည်ဆောက်အချိန်ပါဝင်သော device ကို related သတင်းအချက်အလက်ကိုပြသနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။
ပြန်ကြားရေးဒီအသုံးဝင်သော app ထဲမှာလည်းရရှိနိုင်အခမဲ့နှင့်အသုံးပြုသောမှတ်ဉာဏ်နှင့်အတူ RAM ကိုအရွယ်အစားနှင့်ဆက်စပ်သော။
ယခုတွင်သင်သည်လည်းရဲ့ IMEI number, IMSI နံပါတ်, SIM ကိုအော်ပရေတာနာမကိုအမှီအဖြစ် SIM ကိုအော်ပရေတာ ID ကိုပါရှိသည်ထားတဲ့အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းနှင့်အတူဆင်းမ်ကဒ် related အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။
သင်တို့သည်လည်းဗားရှင်းဖြန့်ချိခြင်းနှင့် SDK ကိုနံပါတ်တစ်ခုအပါအဝင်, သင့်ရဲ့ device သည့် OS ဗားရှင်းစစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။
သိုလှောင်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောသတင်းအချက်အလက်နှင့်စပ်လျဉ်း အကြှနျုပျ၏ Device ကိုအင်ဖို ကထုတ်ကုန်အများစုအပေါ်အလုပ်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျနော်တို့ကတိကျမှန်ကန်မှုကိုတိုးတက်စေရန်ပေါ်မှာအလုပ်လုပ်နေကြပေမယ့်ပြည်တွင်းရေးအဖြစ်ပြင်ပသတင်းအချက်အလက်များပြသထားတယ်။
အကြှနျုပျ၏ device ကိုအင်ဖို app ကိုလည်းသင့်ရဲ့ device ကိုအမြစ်ဝင်ရောက်ခွင့်သို့မဟုတ်မရှိပါတယ်ရှိမရှိစစ်ဆေးရန်သင့်အားကူညီပေးသည်။ အမြစ်စစ် tab ကိုအမြစ်ဝင်ရောက်ခွင့်သို့မဟုတ်စူပါအသုံးပြုသူ access ကိုဆက်စပ်အသေးစိတ်ပြသထားတယ်။
သင်တို့သည်လည်းဒါအသေးစိတ်နှင့်အတူအလုပ်ရှုပ် box ကိုလမ်းကြောင်းအတိုင်း, အလုပ်ရှုပ် box ကို install လုပ်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ရှိမရှိစစ်ဆေးသို့မဟုတ်မနိုင်။
သငျသညျ wifi စမ်းသပ်ရန်သို့မဟုတ်သင့် Wi-Fi ကိုစစ်ဆေးချင်တယ်ဆိုရင်သင့်ရဲ့ Wi-Fi status ကိုအဖြစ်ကွန်နက်ရှင်နာမကိုအမှီနှင့်အတူ wifi mac address ကိုစစျဆေးနိုငျရှိရာ, ထို့နောက်လည်းဒီ app ကအရမ်းအသုံးဝင်စေနိုင်ပါတယ်။
အားလုံးအားလုံးအတွက်အကြှနျုပျ၏ Device ကိုအင်ဖို app ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်, သင်သည်အလွန်လျင်မြန်စွာလည်းလွယ်ကူတာနှင့်အတူသင်၏လက်ညှိုးကိုအကြံပေးချက်များမှာသင့်ရဲ့ device ကို၏ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲနှင့် ပတ်သက်. အားလုံးအခြေခံသတင်းအချက်အလက်ရှိသည်။
device ကိုအင်ဖို သငျသညျဟာ့ဒ်ဝဲ (HW) နှင့်လည်း Android ရဲ့ Operating System ကို Software များ (OS) အပါအဝင်သင့်ရဲ့ Android စမတ်ဖုန်းများ၏ပြည့်စုံသောသတ်မှတ်ချက်များနှင့် configurations, ပြသနိုင်ဖို့ကူညီပေးသည်။
ဤစက်ကိရိယာအင်ဖိုက 4.4 KitKat ကို, 5.1 Lollipop, 6.0 Marshmallow, 7.0 Naugat, 8.0 င်ဖြစ်စေ, အန်းဒရွိုက်ဗားရှင်းသင့်ရဲ့ device ကိုပေါ်ပြေးသောစစျဆေးဖို့အသုံးဝင်သည်။ ဒါကြောင့်အပေါ် 0r 8.1 Oreo နှင့် Android P ကိုကဲ့သို့အနာဂတ်ဗားရှင်းများအတွက်အဖြစ်ကောင်းစွာ။
ဒီ app ကို download လုပ်အပေါင်းတို့နှင့်အတူစစ်ဆေးမဟုတ်ဘဲ, settings ကိုစစ်ဆေးသူတို့ကိုသင့်ရဲ့စမတ်ဖုန်းအပေါ်ကွဲပြားခြားနားသော module တစ်ခုအတွက်တဦးတည်းနေဖြင့်တဦးတည်းကိုရှာဖွေရန်မလိုအပ် device ကိုအင်ဖို တစ်နေရာတည်းမှာရုံမျှမငြီးငွေ့စရာအညွှန်းပွတ်ဆွဲခြင်းနှင့်စစ်ဆေးပါ။
အန်းဒရွိုက်9Pie များအတွက် + ပံ့ပိုးမှု
အကြှနျုပျ၏ Device ကိုအင်ဖို - ဟာ့ဒ်ဝဲ & Software များ
3.22 ကို MB
စနစ်အချက်အလက်များ Droid …